VESA Na-ewebata Ihe ngosi Displayport 1.4 Ọhụrụ na 8k @ 60Hz Video na Ike Okike | Esi m mac
Naanị ụnyaahụ ozi mebiri na VESA (Video Electronics Standards Association) gosipụtara ya DisplayPort 1.4 nkọwa, nke ahụ bụ, ụdị kachasị ọhụrụ nke ọkọlọtọ maka ịnyefe data ọdịyo na vidiyo. Nke a nkọwapụta e ọtụtụ-eji Mac kọmputa na a ogologo oge na a ga-adiaha na ọhụrụ kọmputa na-eme n'ọdịnihu.
Ọbịbịa nke ọkwa ọhụrụ a na-aza mgbe ọ bụla enwewanye ọchịchọ maka nkwado dị elu ma ọ bụ teknụzụ ọhụrụ etinyere na ihuenyo akpọ HDR. Ka ọ dị ugbu a, ngwaọrụ ọhụrụ dịka MacBook kachasị nwere njikọ USB C ma ọ bụ MacBook Pro na Thunderbolt ma dakọtara na DisplayPort 1.2, njikọ ndị na-enye bandwidth zuru ezu iji gosipụta ihe oyiyi 4K na 60Hz site na otu eriri.
Ọbịbịa nke nkọwa ọhụrụ ndị a bụ ọzọ kpatara ọganihu na teknụzụ, nkwado nke mkpebi mkpebi dị elu ma ọ bụ HDR. Ka anyị cheta na ihe dị ka otu afọ gara aga, VESA wepụtara DisplayPort 1.3 ịbawanye bandwidth na nke a n'ụzọ nwere ike ibunye otu ọdịnaya USB 5K na 8K na 60 na 30 Hz n'otu n'otu, mana o mechara yie ka ọkọlọtọ ọhụrụ ahụ ga-abụ Ngosipụta 1.4, nkọwapụta nke nwere ike ibu ọdịnaya 8K na 60Hz nke ahụ na-akwadokwa HDR na 5K na 8K.
Akụkụ kachasị mma nke ihe a bụ na ụdị DisplayPort a na-eji mkpakọ eserese n’enweghi ndapụta ọhụhụ na-enye bandwit nke 8.1 Gbps kwa laini, ya mere enwere ike igosipụta onyonyo na 8K na 60Hz na 4K na 120Hz na HDR. Na mgbakwunye, yana Expanded audio transport nkọwapụta, ọ ịgbasa ruo 32 ọdịyo ọwa na niile na-ewu ewu ọdịyo formats.
Agbanyeghị, ọ bụghị ihe niile bụ ozi ọma yana ọ bụ DisplayPort 1.3 a tụgharịrị uche ọbụnadị ndị nhazi Intel ọhụụ, Skylake, yabụ o yikarịrị ka anyị ga-echere iji hụ ihuenyo Thunderbolt 5K ruo mgbe opekata mpe afọ na-esote na-etinye DisplayPort 1.4 na onye maara, ma eleghị anya Apple na-enye ihe ịtụnanya ahụ nwere ike nke na-egwu ọdịnaya 8K.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » VESA Na-ewebata Ihe ngosi Displayport 1.4 Ọhụụ na 8k @ 60Hz Video na ikike ọdịyo